'राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड'का लागि आवेदन खुला ! विधाहरु, सहभागिताका नियम र छनौट प्रक्रिया यस्ता छन् ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
‘राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड’का लागि आवेदन खुला ! विधाहरु, सहभागिताका नियम र छनौट प्रक्रिया यस्ता छन् !
काठमाडौं । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) फोटोले आगामी २०७५ साल बैशाख १३ गते राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७४’ गर्ने भएको छ । युवा फोटोपत्रकार साथीहरुको उच्च मनोवल वृद्धिको लागि उहाँहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप फरक फरक १३ बिधामा नगद पुरस्कार सहित, ट्रफी, सम्मानपत्र प्रदान गर्ने आयोजक संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । भद्रकालीस्थित आर्मी अफिर्सस् क्लवमा आयोजना हुने कार्यक्रम विभिन्न ४ वटा टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेछ ।
२) वर्ष उत्कृष्ट फोटोपत्रकारीता विधा : विभिन्न ११ वटा विधामध्येबाट उत्कृष्ट ठहर भएका एकजना फोटो पत्रकारलाई यो अवार्ड प्रदान गरिने छ । अवार्डमा २५ हजार नगद, ट्रफी र सम्मानपत्र रहनेछ ।
३) खेलकुद फोटोपत्रकारीता विधा : यो विधा अन्र्तगत खेलकुदको क्षेत्रमा उत्कृष्ट फोटो खिच्ने एकजना फोटो पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
४) पर्यटन तथा संस्कृति विधा : देशको पर्यटन तथा संस्कृतिलाई फोटोको माध्यमबाट पत्रकारितामा उतार्ने फोटो पत्रकारहरुलाई यो विधामा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
५) राजनैतिक फोटोपत्रकारीता विधा : देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधिलाई फोटोको माध्यमबाट समाचार बनाउने फोटो पत्रकारहरुलाई यो विधाको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
६) दैनिक जीवन फोटोपत्रकारीता विधा : समाजको दैनिक गतिविधिलाई फोटोको माध्यमबाट समाचारका रुपमा प्रकाशित गर्ने पत्रकारहरुलाई यो विधाको पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
७) मनोरन्जन फोटोपत्रकारीता विधा : मनोरञ्जन क्षेत्रका गतिविधिलाई फोटो मार्फत समाचार बनाउने फोटो पत्रकार यो विधाबाट पुरस्कृत हुनेछन् ।
८) आर्थिक फोटोपत्रकारीता विधा : व्यापार, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा भै रहेका विभिन्न कृयाकलाप फोटोको माध्यमबाट समाचार बनाउने फोटो पत्रकारले यो विधाको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
१०) उपत्यका वाहिर फोटोपत्रकारीता (मोफसल) विधा : राजधानी बाहिर रहेर सक्रिय रुपमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत फोटो पत्रकारहरु मध्येबाट एकजनाले यो पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
११) अनलाईन फोटोपत्रकारीता विधा : विभिन्न अनलाईन समाचार माध्यममा कार्यरत फोटो पत्रकारहरु मध्ये एकजनालाई यो विधाको पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
१२) स्वतन्त्र फोटोपत्रकारीता विधा : विभिन्न संन्चार माध्ययममा स्वतन्त्र ढंगवाट फोटोको सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएका फोटो पत्रकारहरु मध्ये एकजनालाई यो विधाको पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
१३) एनएफपीजे सक्रिय सदस्य विधा : राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहका सक्रिय सदस्यमध्ये एकजनालाई यो राशीको पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
राष्ट्रिय फोटोपत्रकारीता अवार्ड २०७४मा सहभागीताका लागि नियमहरु :